ယူရေးရှားရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤစာရင်းတွင် ယူရေးရှားရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများပါဝင်ပြီး အထူးနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြင့် အချို့နယ်မြေဒေသတို့ ပါဝင်ကြသည်။
ယူရေးရှားသည် အစဉ်အလာအရ တိုက်ကြီးများဖြစ်သော ဥရောပတိုက်နှင့် အာရှတိုက်တို့အား ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော တိုက်ဖြစ်သည်။ ယူရေးရှားသည် အာဖရိကတိုက်နှင့် ဆူးအက်ကျွန်းဆက်တွင် ပိုင်းခြားထားသည်။ မော်လတာနိုင်ငံကဲ့သို့သော အချို့သောနိုင်ငံများသည် အစဉ်အလာအရသာ ယူရေးရှား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းလည်း အာဖရိကကျောက်လွှာပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ယူရေးရှားသည် ဩစတြေးလေးရှား(အိုရှန်းနီးယား)ဖြင့် မလေးကျွန်းစု၏ တနေနေရာတွင် ပိုင်းခြားထားပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တီမောနိုင်ငံတို့အား ၎င်းတွင် အများအားဖြင့် မှတ်ယူသည်။
အချို့သော ဒေသများသည် ယူရေးရှားရှိ နိုင်ငံများ၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အပေါ်မှီခို၍ ဖြစ်စေ ဆက်နွယ်နေသော်လည်း ကုန်းမြေထုအနေဖြင့် ဆက်နွယ်၍နေခြင်း မရှိပေ။ ဥပမာအားဖြင့် ဒိန်းမတ်နယ်မြေဖြစ်သော ဂရင်းလန်ကျွန်း၊ ပြင်သစ် ပင်လယ်ရပ်ခြားဒေသများ၊ ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများနှင့် စပိန်မြို့များဖြစ်သည့် စီယုတာမြို့နှင့် မယ်လီလာမြို့တို့ ဖြစ်သည်။
၁ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများ
၁.၁ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ
၁.၂ ကုလသမဂ္ဂ လေ့လာသူနိုင်ငံများ
၁.၃ အကန့်အသတ်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံများ
ဖော်ပြပါစာရင်းတွင်ပါရှိသော နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကမ္ဘောဒီးယား ဘုရင့်နိုင်ငံ ခမာ: រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Preăh Réachéa Nachâk Kâmpŭchéa ဖနွမ်းပင်မြို့
ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ ကာဂျစ္စတန် သမ္မတနိုင်ငံ ကာဂျစ်: Кыргыз Республикасы Kırgız Respublikası
ရုရှား: Кыргызская Республика Kyrgyzskaya Respublika
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ ကာဇက်စတန် သမ္မတနိုင်ငံ ကာဇက်: Қазақстан
ကာဇက် Transliteration: Qazaqstan
Russian Transliteration: Kazakhstán ကာဇက်: Қазақстан Республикасы Qazaqstan Respublïkası
ရုရှား: Республика Казахстан Respublika Kazakhstan
ကာတာနိုင်ငံ State of Qatar အာရပ်: دولة قطر‎ Dawlat Qaṭar ဒိုဟာမြို့
ကိုရီးယား (တောင်) ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ကိုရီးယား: 대한민국 Daehan-minguk ဆိုးလ်မြို့
ကိုရီးယား (မြောက်) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကိုရီးယား: 조선민주주의인민공화국 Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk ပြုံယမ်းမြို့
ကူဝိတ်နိုင်ငံ State of Kuwait အာရပ်: دولة الكويت‎ Dawlat al-Kuwait Kuwait City
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Czech Republic ချက်: Česko ချက်: Česká republika ပရက်ဂ်မြို့
ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ ခရိုအေးရှား သမ္မတနိုင်ငံ ခရိုအေးရှား: Hrvatska ခရိုအေးရှား: Republika Hrvatska Zagreb
ဂျပန်နိုင်ငံ ဂျပန်နိုင်ငံ ဂျပန်: 日本国 Nippon-koku/Nihon-koku ဂျပန်: 日本国 Nippon-koku/Nihon-koku တိုကျိုမြို့
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဂျာမနီ ဖက်ဒရယ် သမ္မတနိုင်ငံ ဂျာမန်: Deutschland ဂျာမန်: Bundesrepublik Deutschland ဘာလင်မြို့
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ[n ၁] ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ ဂျော်ဂျီယာ: საქართველო Sakartvelo Tbilisi
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ဂျော်ဒန် ဟာရှီမိုက် ဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: المملكة الأردنية الهاشميه‎ al-'Urdunn Amman
ဂရိနိုင်ငံ ဟယ်လင်နစ် သမ္မတ နိုင်ငံ ဂရိ: Ελλάδα/ Ελλάς
ဂရိ Transliteration: Ellada/ Ellas ဂရိ: Ελληνική Δημοκρατία
ဂရိ Transliteration: Elliniki Dimokratia အေသင်မြို့
ဂရိ Transliteration: Athina
စင်ကာပူနိုင်ငံ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ Simplified Chinese: 新加坡
မလေး: Republik Singapura Tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு
စပိန်နိုင်ငံ စပိန် ဘုရင့်နိုင်ငံ စပိန်: España စပိန်: Reino de España မဒရစ်မြို့
ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ ဆန်မာရီနို သမ္မတနိုင်ငံ အီတလီ: San Marino အီတလီ: Serenissima Repubblica di San Marino City of San Marino
အီတလီ: Città di San Marino[n ၂]
ဆလိုဗားကီးယားနိုင်ငံ ဆလိုဗက် သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-sk တမ်းပလိတ်:Lang-sk Bratislava
ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ ဆလိုဗေးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ဆလိုဗေးနီးယား: Slovenija ဆလိုဗေးနီးယား: Republika Slovenija Ljubljana
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဆွစ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း လက်တင်: Helvetica
တမ်းပလိတ်:Lang-rm လက်တင်: Confoederatio Helvetica
ဂျာမန်: Schweizerische Eidgenossenschaft
ပြင်သစ်: Confédération suisse
အီတလီ: Confederazione Svizzera
တမ်းပလိတ်:Lang-rm Bern or Berne
ဆွီဒင်နိုင်ငံ ဆွီဒင် ဘုရင့်နိုင်ငံ ဆွီဒင်: Sverige ဆွီဒင်: Konungariket Sverige စတော့ဟုမ်းမြို့
ဆားဘီးယားနိုင်ငံ ဆားဘီးယား သမ္မတနိုင်ငံ Serbian Cyrillic: Србија
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ ဆိုက်ပရပ်စ် သမ္မတနိုင်ငံ ဂရိ: Κύπρος
ဂရိ Transliteration: Kýpros
တူရကီ: Kıbrıs ဂရိ: Κυπριακή Δημοκρατία Kypriakí Dimokratía
တူရကီ: Kıbrıs Cumhuriyeti
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဆီးရီးယား အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: جمهورية سوريا العربية‎ Al-Jumhūriyyah al-ʿArabiyyah as-Sūriyyah ဒမားစကပ်မြို့
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ဆော်ဒီအာရေဗျ ဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: المملكة العربية السعودية‎ al-Mamlaka al-ʻArabiyya as-Suʻūdiyya Riyadh
တရုတ်နိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Simplified Chinese: 中国
Traditional Chinese: 中國 Zhōngguó
Simplified Chinese: 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
Traditional Chinese: 中華人民共和國 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ Turkmen: Türkmenistan Turkmen: Türkmenistan အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့
တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ တာဂျစ်ကစ္စတန် သမ္မတနိုင်ငံ တာဂျစ်: Тоҷикистон Tojikiston တာဂျစ်: Ҷумҳурии Тоҷикистон Jumhurii Tojikiston ဒူရှန်ဘဲမြို့
တီမောလက်စ်တီနိုင်ငံ (အရှေ့တီမော) တီမောလက်စ်တီ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ ပေါ်တူဂီ: República Democrática de Timor-Leste
တူရကီနိုင်ငံ တူရကီ သမ္မတနိုင်ငံ တူရကီ: Türkiye တူရကီ: Türkiye Cumhuriyeti အန်ကာရာမြို့
ထိုင်းနိုင်ငံ ထိုင်း ဘုရင့်နိုင်ငံ ထိုင်း: ประเทศไทย Prathed Thai ထိုင်း: ราชอาณาจักรไทย Ratcha Anachak Thai ဘန်ကောက်မြို့
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ဒိန်းမတ် ဘုရင့်နိုင်ငံ ဒိန်းမတ်: Danmark ဒိန်းမတ်: Kongeriget Danmark ကိုပင်ဟေဂင်မြို့
နယ်သာလန်နိုင်ငံ[n ၃] နယ်သာလန် ဘုရင့်နိုင်ငံ[n ၄] ဒတ်ချ်: Nederland ဒတ်ချ်: Koninkrijk der Nederlanden အမ်စတာဒမ်မြို့ (မြို့တော်)
ဟိတ်မြို့ (အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာမြို့)
ဒတ်ချ်: 's-Gravenhage (Den Haag)
နီပေါနိုင်ငံ နီပေါ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ Nepali:नेपाल Nepāl Nepali: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl ခတ္တမန္ဒုမြို့
နော်ဝေနိုင်ငံ နော်ဝေ ဘုရင့်နိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-nb
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပြင်သစ် သမ္မတနိုင်ငံ ပြင်သစ်: France ပြင်သစ်: République française ပါရီမြို့
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပါကစ္စတန် အစ္စလာမ် သမ္မတနိုင်ငံ အူရဒူ: اسلامی جمہوریہ پاکستان Islāmī Jumhūrī-ye Pākistān အစ္စလာမာဘတ်မြို့
ပိုလန်နိုင်ငံ ပိုလန် သမ္မတနိုင်ငံ ပိုလန်: Polska ပိုလန်: Rzeczpospolita Polska ဝါဆောမြို့
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ ပေါ်တူဂီ သမ္မတနိုင်ငံ ပေါ်တူဂီ: Portugal ပေါ်တူဂီ: República Portuguesa လစ်စဘွန်းမြို့
ဖင်လန်နိုင်ငံ ဖင်လန် သမ္မတနိုင်ငံ ဖင်လန်: Suomi
ဆွီဒင်: Finland ဖင်လန်: Suomen tasavalta
ဆွီဒင်: Republiken Finland ဟယ်လ်ဆင်ကီမြို့
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိုင်ငံ Filipino: Pilipinas Filipino: Republika ng Pilipinas မနီလာမြို့
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်: Việt Nam ဗီယက်နမ်: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ဟနွိုင်းမြို့
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဘင်္ဂလား: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ဒါကာမြို့
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ဘယ်လ်ဂျီယမ် ဘုရင့်နိုင်ငံ ဒတ်ချ်: België
ဂျာမန်: Belgien ဒတ်ချ်: Koninkrijk België
ပြင်သစ်: Royaume de Belgique
ဂျာမန်: Königreich Belgien ဘရပ်ဆဲလ်မြို့
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၊ ငြိမ်ချမ်းရေး၏စံအိမ်တော် ပသျှူး: بروني دارالسلام Negara Brunei Darussalam ဘန်ဒါဆရီဘဂါဝမ်မြို့
ဘာရိန်းနိုင်ငံ ဘာရိန်း ဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: مملكة البحرين‎ Mamlakat al-Baḥrayn Manama
ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ ဘီလာရုဇ် သမ္မတနိုင်ငံ Belarusian and Russian: Беларусь
Belarusian and Russian Transliteration: Byelarus တမ်းပလိတ်:Lang-be
ရုရှား: Республика Беларусь
ဘူတန်နိုင်ငံ ဘူတန် ဘုရင့်နိုင်ငံ Dzongkha: Brug rGyal-Khab Thimphu
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ ဘူလ်ဂေးရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-bg တမ်းပလိတ်:Lang-bg
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ Bosnian, Serbian Latin, Croatian: BiH, Bosna
Serbian Cyrillic: Босна и Херцеговина ဆာရာယေဗိုမြို့
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် မြန်မာ: Pyi-daung-zu Myan-ma Naing-ngan-daw နေပြည်တော်မြို့
မြောက်မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ မြောက်မက်စီဒိုးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-mk
Macedonian Transliteration: Severna Makedonija တမ်းပလိတ်:Lang-mk
မလေးရှားနိုင်ငံ မလေးရှားနိုင်ငံ မလေး: مليسيا
Simplified Chinese: 马来西亚 Traditional Chinese: 馬來西亞
မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ မွန်ဂိုးလီးယား: Монгол улс, Mongol uls မွန်ဂိုးလီးယား: Монгол улс, Mongol uls ဦလန်ဘာတာမြို့
မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ Montenegrin Latin: Crna Gora
မိုနာကိုနိုင်ငံ မိုနာကို ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံတော် ပြင်သစ်: Monaco
အီတလီ: Monaco ပြင်သစ်: Principauté de Monaco
အီတလီ: Principato di Monaco မိုနာကိုမြို့[n ၂]
မော်လတာနိုင်ငံ မော်လတာ သမ္မတနိုင်ငံ မောတီးစ်: Malta မောတီးစ်: Repubblika ta' Malta ဗယ်လက်တာမြို့
မောတီးစ်: Il-Belt Valletta
မော်လဒိုက်နိုင်ငံ မော်လဒိုက် သမ္မတနိုင်ငံ Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ Divehi Rājjey ge Jumhuriyyā Malé
မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ မော်လ်ဒိုဗာ သမ္မတနိုင်ငံ ရိုမေးနီးယား: Moldova ရိုမေးနီးယား: Republica Moldova Chisinau
ယီမင်နိုင်ငံ ယီမင် သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: الجمهورية اليمنية‎ Al-Jumhūriyyah al-Yamaniyyah San‘a’
ယူကရိန်းနိုင်ငံ ယူကရိန်းနိုင်ငံ ယူကရိန်း: Україна
Ukrainian Transliteration: Ukrayina / Ukraina ကီးယက်မြို့
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ[n ၅] ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန် ပေါင်းစည်း ဘုရင့်နိုင်ငံတော် တမ်းပလိတ်:Lang-cy
အိုင်းရစ်: Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ ရိုမေးနီးယား: România ဗူးခရက်မြို့
ရုရှားနိုင်ငံ ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ရုရှား: Росси́я
ရုရှား Transliteration: Rossiya ရုရှား: Российская Федерация Rossiyskaya Federatsiya မော်စကိုမြို့
ရုရှား Transliteration: Moskva
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ လက်ဘနွန် သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: الجمهورية اللبنانية‎ al-Jumhūrīyah al-Lubnānīyah
ပြင်သစ်: République libanaise
လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ လစ်တန်စတိန်း ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံ ဂျာမန်: Liechtenstein ဂျာမန်: Fürstentum Liechtenstein Vaduz
လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ လစ်သူယေးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ လစ်သူရေးနီးယား: Lietuva လစ်သူရေးနီးယား: Lietuvos Respublika Vilnius
လတ်ဗီယာနိုင်ငံ လတ်ဗီယာ သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-lv တမ်းပလိတ်:Lang-lv ရီဂါမြို့
လာအိုနိုင်ငံ လာအို ပြည်သူ့ဒီမိုကရတစ် သမ္မတနိုင်ငံတော် လာအို:ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao ဗီယင်ကျန်းမြို့
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ Grand Duchy of Luxembourg တမ်းပလိတ်:Lang-lb
ဂျာမန်: Luxemburg တမ်းပလိတ်:Lang-lb
ပြင်သစ်: Grand-Duché de Luxembourg
ဂျာမန်: Großherzogtum Luxemburg Luxembourg City
ပြင်သစ်: Ville de Luxembourg
ဂျာမန်: Luxemburg Stadt
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သီရိလင်္ကာ ဒီမိုကရက်တစ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ Sinhalese:
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဟန်ဂေရီ: Magyarország ဟန်ဂေရီ: Magyarország ဘူဒါပတ်စ်မြို့
အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ အက်စ်တိုးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ အက်စတိုးနီးယား: Eesti အက်စတိုးနီးယား: Eesti Vabariik Tallinn
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ[n ၆] အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတနိုင်ငံ အင်ဒိုနီးရှား: Republik Indonesia ဂျကာတာမြို့
အင်ဒိုရာနိုင်ငံ အင်ဒိုရာတောင်ကြား မင်းသားနိုင်ငံ Andorra ကတ်တလန်: Principat d'Andorra
ပြင်သစ်: Principauté d'Andorre
စပိန်: Principado de Andorra Andorra la Vella
ကတ်တလန်: Andorra la Vella
စပိန်: Andorra la Vieja
အစ္စရေးနိုင်ငံ အစ္စရေးနိုင်ငံ ဟီဘရူး: יִשְרָאֵל‎ Medīnat Yisrā'el
အာရပ်: إسرائيل‎ Dawlat Isrā'īl
ဂျေရုဆလင်မြို့ (နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိ)
အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ[n ၁] အဇာဘိုင်ဂျန် သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-az တမ်းပလိတ်:Lang-az ဘာကူးမြို့
အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ အယ်လ်ဘေးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ အယ်လ်ဘေးနီးယား: Shqipëria အယ်လ်ဘေးနီးယား: RepublikaeShqipërisë တီရာနာမြို့
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အာဖဂန်နစ္စတန် အစ္စလာမ် သမ္မတနိုင်ငံ Pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت Da Afġānistān Islāmī Jomhoriyat ပါရှား: جمهوری اسلامی افغانستان Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānistān ကဘူးလ်မြို့
အာမေးနီးယားနိုင်ငံ[n ၁] အာမေးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-hy
Armenian Transliteration: Hayastan/Hayq တမ်းပလိတ်:Lang-hy Hayastani Hanrapetut’yun Yerevan
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ အာရပ်: دولة الإمارات العربية المتحدة‎ Dawlat al-Imārāt al-‘Arabīyah al-Muttaḥidah အာရပ်: دولة الإمارات العربية المتحدة‎ Dawlat al-Imārāt al-‘Arabīyah al-Muttaḥidah အဘူဒါဘီမြို့
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံ ဟင်ဒီ: भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya နယူးဒေလီမြို့
အိုက်စလန်နိုင်ငံ အိုက်စလန် သမ္မတနိုင်ငံ အိုက်စလန်: Ísland အိုက်စလန်: Lýðveldið Ísland Reykjavík
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ အိုင်ယာလန် သမ္မတနိုင်ငံ[n ၇] အိုင်းရစ်: Éire အိုင်းရစ်: Poblacht na hÉireann[n ၇] ဒပ်ဗလင်မြို့
အိုင်းရစ်: Baile Átha Cliath
အိုမန်နိုင်ငံ အိုမန် ဆူလတန်နိုင်ငံ အာရပ်: سلطنة عُمان‎ Salṭanat ʻUmān Muscat
အီတလီနိုင်ငံ အီတလီ သမ္မတနိုင်ငံ အီတလီ: Italia အီတလီ: Repubblica Italiana ရောမမြို့
အီရတ်နိုင်ငံ အီရတ် သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: جمهورية العراق‎ Jumhūriyat Al-Irāq
Kurdish: كۆماری عێراق Komarî Êraq
အီရန်နိုင်ငံ အီရန် အစ္စလာမ် သမ္မတနိုင်ငံ ပါရှား: جمهوری اسلامی ايران Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān တီဟီရန်မြို့
ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ ဥဇဗက် သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-uz တမ်းပလိတ်:Lang-uz Tashkent
ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ဩစတြီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ဂျာမန်: Österreich ဂျာမန်: Republik Österreich ဗီယင်နာမြို့
ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂတွင် လေ့လာသူနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အာရပ်: دولة فلسـطين‎As-Sulta Al-Wataniyya Al-Filastīniyya Ramallah (de facto)
Holy See ဗာတီကန်စီးတီးနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂတွင် လေ့လာသူနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အီတလီ: Città del Vaticano
လက်တင်: Santca Sedes အီတလီ: Stato della Città del Vaticano
အကန့်အသတ်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံများ[ပြင်ဆင်ရန်]
Abkhazia[n ၁] De jure part of Georgia[s ၁] တမ်းပလိတ်:Lang-ab Apsny
ဂျော်ဂျီယာ: აფხაზეთი Apkhazeti/Abkhazeti
ရုရှား: Абха́зия Abhazia
ဂျော်ဂျီယာ: სოხუმი Sokhumi
Kosovo Republic of Kosovo De jure part of Serbia[s ၂] အယ်လ်ဘေးနီးယား: Kosova, Kosovë
Serbian Cyrillic: Косово Kosovo
အယ်လ်ဘေးနီးယား: RepublikaeKosovës
Serbian Cyrillic: Република Косово Republika Kosovo
Serbian Cyrillic: Приштина Priština
Artsakh[n ၁] Republic of Artsakh De jure part of Azerbaijan[s ၃] တမ်းပလိတ်:Lang-hy Artsakh တမ်းပလိတ်:Lang-hy Artsakhi Hanrapetut’yun Stepanakert
Northern Cyprus Turkish Republic of Northern Cyprus De jure part of Cyprus[s ၄] တူရကီ: Kuzey Kıbrıs တူရကီ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti North Nicosia
တူရကီ: Kuzey Lefkoşa
South Ossetia[n ၁] De jure part of Georgia[s ၁] တမ်းပလိတ်:Lang-os Khussar Iryston
ဂျော်ဂျီယာ: სამხრეთ ოსეთი Samkhret Oseti
ရုရှား: Южная Осетия 'Yuzhnaya Osetiya
Taiwan Republic of China See Legal Status of Taiwan. Traditional Chinese: 臺灣/台灣 Táiwān
Taiwanese: 臺灣/台灣 Tâi-oân Traditional Chinese: 中華民國 Zhōnghuá Mínguó
Transnistria Pridnestrovian Moldavian Republic De jure part of Moldova[s ၅] တမ်းပလိတ်:Lang-mo Transnistria
ရုရှား: Приднестрóвье Pridnestrov'ye ယူကရိန်း: Придністрóв'я Prydnistrov'ya
တမ်းပလိတ်:Lang-mo Republica Moldovenească Nistreană
ရုရှား: Приднестрóвская Молдáвская Респýблика Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika
ယူကရိန်း: Придністровська Молдавська Республіка Pridnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika
Akrotiri and Dhekelia Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများ Episkopi Cantonment
ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ နယ်မြေ ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ နယ်မြေ ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများ အင်္ဂလိပ်: British Indian Ocean Territory အင်္ဂလိပ်: British Indian Ocean Territory Diego Garcia
Christmas Island[n ၈] Territory of Christmas Island External territory of Australia အင်္ဂလိပ်: Christmas Island အင်္ဂလိပ်: Territory of Christmas Island Flying Fish Cove
Cocos (Keeling) Islands[n ၈] Territory of Cocos (Keeling) Islands External territory of Australia အင်္ဂလိပ်: Cocos Islands အင်္ဂလိပ်: Territory of Cocos (Keeling) Islands West Island
Faroe Islands Constituent country of the Kingdom of Denmark တမ်းပလိတ်:Lang-fo
ဒိန်းမတ်: Færøerne Tórshavn
ဂျီဘရော်လ်တာ ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများ ဂျီဘရော်လ်တာ
Guernsey[n ၅] Bailiwick of Guernsey Crown Dependency of The Crown in Right of the United Kingdom Guernésiais: Guernesey Guernésiais: Bailliage de Guernesey Saint Peter Port
Isle of Man[n ၅] Crown Dependency of The Crown in Right of the United Kingdom တမ်းပလိတ်:Lang-gv တမ်းပလိတ်:Lang-gv Douglas
Jersey[n ၅] Bailiwick of Jersey Crown Dependency of The Crown in Right of the United Kingdom Jèrriais: Jèrri Jèrriais: Bailliage de Jersey Saint Helier
Åland Islands Åland Islands ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆွီဒင်: Åland
ဖင်လန်: Ahvenanmaa ဆွီဒင်: Landskapet Åland
ဖင်လန်: Ahvenanmaan maakunta Mariehamn
ဟောင်ကောင် ဟောင်ကောင် အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ Traditional Chinese: 香港 Traditional Chinese: 香港特別行政區 ဟောင်ကောင်
မကာအို မကာအို အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ၊ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ တရုတ်: 澳門特別行政區 မကာအို
Svalbard Svalbard နော်ဝေးနိုင်ငံ၏ အထူးဒေသ Norwegian: Svalbard Norwegian: Svalbard Longyearbyen
↑ ၁.၀ ၁.၁ International recognition of Abkhazia and South Ossetia
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ဥရောပနှင့် အာရှတိုက်အကြား ခြားနားထားသော နယ်ခြားမျဉ်းဖြစ်သည့် ထရန့်ကော့ကေးရှားဒေသ၏ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည် ။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ဤနိုင်ငံများမှ မြို့ပြနိုင်ငံအဆင့်ရှိသော နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။
↑ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်အတွက် အမည်တိုဖြစ်ပြီး ဘုရင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိ အကြီးဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
↑ Refers to the sovereign entity encompassing the countries the နယ်သာလန်နိုင်ငံ (comprising the territory in Europe and3islands in the Caribbean), Aruba, Curaçao and Sint Maarten.
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ စကော့တလန်နိုင်ငံနှင့် ဝေလနိုင်ငံ၊ ထီးနန်း၏ အစောင့်အရှောက်ခံနယ်မြေများဖြစ်သော Guernsey၊ Isle of Man နှင့် Jersey တို့ ပါဝင်သည်။ ပင်မကျွန်းကြီးပေါ်ရှိ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ စကော့တလန်နိုင်ငံနှင့် ဝေလနိုင်ငံတို့အား ပေါင်းစည်းထားသော ကျွန်းနိုင်ငံကို ဂရိတ်ဗြိတိန် (တခါတရံ၌ အတိုကောတ်အဖြစ် ဗြိတိန်အဖြစ် သုံးနှုန်းကြသည်) ဟုခေါ်ပြီး တခါတရံ၌ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် အနက်တူအသုံးပြုသည်။
↑ အချို့သော နယ်မြေများသည် အာရှတိုက် သို့မဟုတ် အိုရှန်းနီးယား၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟု အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နိုင်သည်။
↑ ၇.၀ ၇.၁ အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် Poblacht na hÉireann တို့သည် တရားဝင် အမည်ရှည်များမဟုတ်ကြပဲ အိုင်ယာလန်ကျွန်းမှ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံအား ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန် တရားဝင်ဖော်ပြချက်အဖြစ်သာ ရည်ညွှန်းဖော်ပြရာ၌သာ အသုံးပြုသည်။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Debate exists as to whether Australian territories are integral areas of Australia of not
↑ United States CIA World Factbook -- Netherlands။ 21 May 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Republic of Ireland Act, 1948။ No. 22/1948 (1948)။ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ An tAcht Phoblacht na hÉireann, 1948။ Uimhir 22 de 1948 (1948)။ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Holy See (Vatican City)။ Cia.gov။7January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Taiwan: Republic of China is the name recognised as official by the Taipei authorities; Taiwan is the name used by governments which broke off diplomatic relations with Taipei after the UN resolution of October 1971; the name Chinese Taipei is used for sporting events and membership of APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), and reputedly for Taiwan’s application to the WTO as the short form of Independent Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu. It competes as Chinese Taipei in sports.
↑ Jan Mayen။ World Fact Book။ Central Intelligence Agency။4March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယူရေးရှားရှိ_အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့်_အမှီအခိုနယ်မြေများ_စာရင်း&oldid=729190" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။